Mawqif cusub oo Qaramada midoobay ka soo saartay cunaqabateynta hubka ee saaran Somalia+Eedayn culus oo loo jeediyey Dawlada Somalia | Baligubadlemedia.com
Mawqif cusub oo Qaramada midoobay ka soo saartay cunaqabateynta hubka ee saaran Somalia+Eedayn culus oo loo jeediyey Dawlada Somalia
Guddiga golaha ammaanka ee Qaramadda Midoobay u qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee weli saaran Soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeediyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Guddiga ayaa sheegay in dowladdu ay ku fashilantay inay kala shaqeeyso howlaha la socodka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxa ay ku baaqeen in la xoojiyo cunaqabateynta saaran Soomaaliya, islamarkaana lagu sameeyo dib u habeyn, si looga hortago hubka sharci darrada ah ee gacanta u gala kooxaha argagixisada, gaar ahaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish.
Warbixinta guddiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in cunaqabateynta dhuxusha Somaliya qeyb ahaan guul laga gaaray islamarkaana uusan jirin dakhli ay ka hesho Al-Shabaab.
Qaar ka mid ah xubnaha guddiga ee golaha ammaanka warbixinta siiyey hadalladooda waxaa ka mid ahaa: